यही सरकारले निरन्तरता पायो भने नेकपा समाप्त हुन्छ : खनाल – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यही सरकारले निरन्तरता पायो भने नेकपा समाप्त हुन्छ : खनाल
२९ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष चल्ने हो भने जनमत समाप्त हुने बताएका छन् ।साहना प्रधान प्रतिष्ठानद्वारा सोमबार आयोजित ‘नेकपाको आजको समस्या के हो ? सम्भावना के हो ?’ शीर्षकको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्दै खनालले यस्तो बताएका हुन ।
सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा आधा जनमत खुम्चिसकेको खनालको भनाइ छ । उनले नेकपासामु तीन वटा विकल्प रहेको बताए ।वरिष्ठ नेता खनालले अघि सारेका तीन विकल्प उनकै शब्दमा :यथास्थितिमा जाने : पार्टीमा फटुने हो कि भनेर बस्ने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट त्रसित भएर बस्ने । यो सरकार पाँच वर्ष चल्ने हो भने नेकपा ‘रुट आउट’ हुन्छ । नेकपाको जनमत समाप्त हुन्छ । अहिले नै आधा जनमत खुम्चिसकेको छ । जताततै सरकारको विरोध बढेको छ । एकपछि अर्को अनियमिततालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले कतै केही भएको छैन भन्दै आउनु भएको छ । यसरी जाँदा भविष्य अन्धाकार हुने देखिन्छ ।
सेनाको ब्यारेकमा फैलियो कोरोना, उपरथीलाई नै संक्रमण !
ट्याक्सीसहित सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार, मोडालिटी बनाइने